Iresiphi Yokubhaka Yesifo Sikashukela: Inhlama Yeshukela Yesifo Sikashukela > Ukudla ngesifo sikashukela
Amapheya Ushukela Ashukela Onoshukela Omnandi
Yize kuvinjelwe, kuvunyelwe ama-khekhe ngohlobo lwesifo sikashukela, izindlela zokupheka ezizosiza ukulungisa amakhukhi amnandi, ama-roll, ama-muffin, ama-muffin nezinye izinto ezinhle.
I-diabetes mellitus yanoma yiluphi uhlobo ibonakala ngokwanda kwe-glucose, ngakho-ke isisekelo sokwelashwa kokudla ukusetshenziswa kokudla okunenkomba ephansi ye-glycemic, kanye nokufakwa ngaphandle kwamafutha nokudla okuthosiwe ekudleni. Yini engalungiswa kusuka ekuhlolweni kwesifo sikashukela sohlobo 2, sizokhuluma ngokuqhubekayo.
Ukudla okuyisipesheli, kanye nokuzivocavoca ngokomzimba ngohlobo 2 sikashukela, kungagcina inani likashukela lilijwayelekile.
Ukuze ugweme izinkinga ezihambisana nesifo sikashukela, kunconywa ukuthi kuhlolwe njalo futhi ulandele zonke izincomo ze-endocrinologist.
Kumikhiqizo kafulawa bekungemnandi nje kuphela, kodwa futhi kusebenza, udinga ukulandela izincomo eziningana:
Nqaba ufulawa kakolweni. Ukubuyiselwa, sebenzisa i-rye noma ufulawa we-buckwheat, onenkomba ephansi ye-glycemic.
Ukubhaka ngesifo sikashukela kulungiswa ngamanani amancane ukuze kungabangeli isilingo sokudla konke ngasikhathi sinye.
Musa ukusebenzisa iqanda lenkukhu ukwenza inhlama. Lapho kungenakwenzeka ukwenqaba amaqanda, kufanelekile ukunciphisa inani labo libe ubuncane. Amaqanda abilisiwe asetshenziswa njenge-toppings.
Kuyadingeka ukubuyisela ushukela ekubhaka nge-fructose, i-sorbitol, isiraphu yemaple, i-stevia.
Lawula ngokuqinile okuqukethwe kwekhalori yesitsha nenani lama-carbohydrate asheshayo.
Ibhotela lithathelwa indawo kangcono ngemargarine enamafutha amancane noma uwoyela wemifino.
Khetha ukugcwaliswa okungewona okunamafutha okubhaka. Lezi zingaba ushukela, izithelo, amajikijolo, ushizi wekhokho osezingeni eliphansi, inyama noma imifino.
Ukulandela le mithetho, ungapheka ama-pastry angenashukela angenashukela kwabanesifo sikashukela. Into esemqoka - akudingeki ukhathazeke ngezinga le-glycemia: izohlala ijwayelekile.
Ufulawa we-Buckwheat ungumthombo wamavithamini A, iqembu B, C, PP, i-zinc, ithusi, i-manganese ne-fiber.
Uma usebenzisa izimpahla ezibhakiwe kusuka kufulawa we-buckwheat, ungathuthukisa ukusebenza kobuchopho, ukuhamba kwegazi, uqinisekise ukusebenza okujwayelekile kohlelo lwezinzwa oluyinhloko, ukuvikela i-anemia, i-rheumatism, isifo sokuqina kwemithambo yegazi nesifo samathambo.
Amakhukhi e-Buckwheat ayindlela yokwelapha yabaneshukela. Le iresiphi emnandi futhi elula yokupheka. Isidingo sokuthenga:
izinsuku - izingcezu ezi-5-6,
ufulawa we-buckwheat - 200 g,
ubisi lwe-nonfat - izinkomishi ezi-2,
uwoyela sunflower - 2 tbsp. l.,
i-cocoa powder - i-4 tsp.,
isoda - isipuni ½.
I-Soda, cocoa nefulawa ye-buckwheat kuxutshwe kahle kuze kutholakale isisindo esiningi. Izithelo zosuku zingumhlabathi nge-blender, kancane kancane zithela ubisi, bese ufaka uwoyela we-sunflower. Amabhola Amanzi enza amabhola enhlama. Ipani lokugcoba limbozwe ngephepha lesikhumba, kanti kuhhavini ukufuthelwa ku-190 ° C. Ngemuva kwemizuzu engu-15, ikhukhi likashukela liyobe selilungile. Le inketho enhle yamaswidi angenawo ushukela kubo bonke abadala nezingane ezincane.
Ukudla buns for ibhulakufesi. Ukubhaka okunjalo kufanelekile kushukela yanoma yiluphi uhlobo. Ukupheka uzodinga:
imvubelo eyomile - 10 g
ufulawa we-buckwheat - 250 g,
obambele ushukela (i-fructose, i-stevia) - 2 tsp.,
i-kefir engenamafutha - ½ ilitha,
Isigamu sengxenye ye-kefir sishiswa ngokuphelele. Ufulawa we-Buckwheat uthululwa esitsheni, kwenziwa umgodi omncane kuwo, kuthi kufakwe imvubelo, usawoti ne-kefir evuthayo. Izitsha zimbozwe ngethawula noma ngesembozo bese zishiyelwa imizuzu engama-20-25.
Bese engeza ingxenye yesibili ye-kefir enhlama. Zonke izithako zixutshwe kahle bese zishiyelwa ukwenziwa ngonyaka ka-60. Isisindo esiphumela kufanele sibe esanele ngama-8-10 buns. Kuhhavini ukufuthelwa ku-220 ° C, imikhiqizo igcotshwa ngamanzi bese ishiyelwa ukubhaka imizuzu engama-30. Ukubhaka i-Kefir sekumi ngomumo!
Izindlela zokupheka zikafulawa we-rye eziphekiwe
Ukubhaka isifo sikashukela sohlobo 2 kusiza kakhulu futhi kudingekile, ngoba kuqukethe amavithamini A, B no-E, amaminerali (i-magnesium, i-sodium, i-phosphorus, i-iron, i-potassium).
Ngaphezu kwalokho, ukubhaka kuqukethe ama-amino acid abalulekile (niacin, lysine).
Ngezansi ukupheka kokubhaka kwabanesifo sikashukela okungadingi amakhono akhethekile wokudla kanye nesikhathi esiningi.
Ikhekhe ngama-apula kanye namapheya. Isitsha sizoba umhlobiso omuhle etafuleni lomkhosi. Izithako ezilandelayo kumele zithengwe:
ama-walnuts - 200 g,
ubisi - 5 tbsp. nezinkezo
ama-apula aluhlaza - ½ kg,
ithini lamapheya - ½ kg
uwoyela yemifino - 5-6 tbsp. l.,
ufulawa we-rye - 150 g,
ukufaka ushukela ekubhakeni - 1-2 tsp.,
amaqanda - izingcezu ezi-3
ukhilimu - 5 tbsp. l.,
usinamoni, usawoti ukunambitha.
Ukulungiselela ibhisikidi elingenashukela, shaya ufulawa, amaqanda ne-sweetener. Usawoti, ubisi no-ayisikhilimu kuthinta kancane kancane isisindo. Zonke izithako zihlanganiswa kuze kube bushelelezi.
Ishidi lokubhaka liyagcotshwa ngamafutha noma limbozwe ngephepha lesikhumba. Ingxenye yenhlama ithululelwa kuyo, khona-ke izingcezu zamapheya, ama-apula abekwa ngaphandle futhi athululelwa engxenyeni yesibili. Bafaka ama-bhisikidi angenawo ushukela kuhhavini ovuthayo afinyelela ku-200 ° C imizuzu engama-40.
Ama-pancake namajikijolo ayindlela emnandi yokwelapha onesifo sikashukela. Ukuze wenze ama-pancake amnandi wokudla, udinga ukulungiselela:
ufulawa we-rye - inkomishi e-1,
iqanda - 1 ucezu
uwoyela yemifino - 2-3 tbsp. l.,
isoda - ½ tsp.,
ushizi wekhishi owomile - 100 g,
i-fructose, usawoti - ukunambitha.
I-Flour ne-slaked soda kuxutshwe esitsheni esisodwa, kuthi kwesesibili - ushizi weqanda ne-cottage. Kungcono ukudla ama-pancake ngokugcwaliswa, wona asebenzisa kuwo ama-currants abomvu noma amnyama. Lawa majikijolo aqukethe izakhi zomzimba ezidingekayo zohlobo 1 nohlobo 2 sikashukela. Ekupheleni, uthele ku-oyela yemifino ukuze ungabhubhisi isidlo. Ukugcwaliswa kwe-Berry kungangezwa ngaphambi noma ngemuva kokupheka ama-pancake.
Amakhekhe ashukela. Ukubhaka isidlo, udinga ukuthenga izithako ezilandelayo:
inhlama ye-rye - 2 tbsp. l.,
imajarini - 50 g
iqanda - ucezu olungu-1,
obambele ushukela - 2 tsp,
omisiwe, ulamula - ukunambitha.
Usebenzisa i-mixer, shaya imajarini enamafutha aphansi neqanda. I-sweetener, izipuni ezimbili zikafulawa, omisiwe womile kanye ne-zest zest zifakwa ku-mass. Hlanganisa konke kuze kube bushelelezi. Ingxenye kafulawa ixubene nengxube ephumayo futhi isuswe izigaxa, ixubha kahle.
Inhlama ephumayo ithelelwa isikhunta. Kuhhavini ukufuthelwa ku-200 ° C, isitsha sisalelwe ukubhaka imizuzu engama-30. Lapho nje amakhekhe esemi ngomumo, angagcotshwa ngoju noma ahlotshiswe ngezithelo namajikijolo.
Ezigulini ezinesifo sikashukela, kungcono ukubhaka itiye ngaphandle koshukela.
Ezinye izindlela zokupheka zokubhaka zokudla
Kunezindlela eziningi zokupheka zokubhaka zohlobo 2 sikashukela, okungaholeli ekushintshashintsheni kwamazinga kashukela.
Lokhu kubhaka kunconywa ukuthi kusetshenziswe ngabanesifo sikashukela njalo.
Ukusetshenziswa kwezinhlobonhlobo zokubhaka kukuvumela ukuthi uguqule imenyu ngoshukela ophezulu.
I-Homotade Carrot Pudding. Ukulungiselela isidlo sokuqala esinjalo, imikhiqizo enjalo iyasebenziseka:
izaqathe ezinkulu - izingcezu ezi-3,
ukhilimu omuncu - 2 tbsp. l.,
i-sorbitol - 1 tsp.,
uwoyela wemifino - 1 tbsp. l.,
ubisi - 3 tbsp. l.,
ushizi wekotishi onamafutha amancane - 50 g,
ginger gated - ingcosana,
ikhumini, ikhiyamu, ikhumini - 1 tsp.
Izaqathe ezihlutshiwe zidinga ukugcotshwa. Amanzi athululelwa kuwo futhi ashiywe ukuze afakwe isikhashana. Izaqathi ezigayiwe zifafazwa ngoshizi kusuka ku-ketshezi ngokweqile. Bese ufaka ubisi, ibhotela nesitshulu emlilweni ophansi cishe imizuzu eyi-10.
I-yolk igcotshwa ngoshizi we-cottage, kanye ne-sweetener enamaprotheni. Ngemuva kwalokho konke kuxutshwe futhi kufakwe izaqathi. Amafomu aqala ukugcotshwa ngamafutha bese afafazwa ngezinongo. Basakaza ingxube. Kuhovini osuke usushisa ukufikela ku-200 ° C faka isikhunta bese ubhaka imizuzu engama-30. Njengoba indishi isilungile, kuvunyelwe ukuyithululela nge-yogurt, uju noma isiraphu yemaple.
Ama-roll ama-Apple angumhlobiso wetafula elimnandi nelinempilo. Ukuze ulungiselele isidlo esimnandi ngaphandle koshukela, udinga ukuthatha lezi zithako ezilandelayo:
i-rye ufulawa - 400 g
ama-apula - izingcezu ezi-5
ama-plums - izingcezu ezi-5,
i-fructose - 1 tbsp. l.,
imajarini - ½ ipakethe,
isaladi ethambile - ½ tsp.,
kefir - ingilazi eyi-1,
usinamoni, usawoti - ingcosana.
Bopha inhlama njengokujwayelekile bese ufaka esiqandisini isikhashana. Ukwenza ukugcwaliswa, ama-apula, amaplamu agxotshwe, engeza i-sweetener kanye nepanini lesinamoni. Khipha inhlama kancane, usakaze ukugcwaliswa bese ufaka kuhhavini osuke usushisa imizuzu engama-45. Ungaziphatha ne-meatloaf, ngokwesibonelo, kusuka ebeleni lezinkukhu, kumunqunqwe namantongomane asikiwe
Ukudla kungenye yezinto ezibaluleke kakhulu ekwelashweni kwesifo sikashukela. Kepha uma ufuna amaswidi ngempela - akunandaba. Ukubhaka kokudla kungena esikhundleni se-muffin, okuyingozi ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 2. Kunokukhethwa okukhulu kwezakhi kunokuba kuthathe ushukela - i-stevia, i-fructose, i-sorbitol, njll. Esikhundleni sikafulawa osezingeni eliphakeme, kusetshenziswa amabanga aphansi - lusiza kakhulu iziguli ezinesifo “esimnandi”, ngoba aziholeli ekwakhiweni kwe-hyperglycemia. Kwiwebhu ungathola izindlela zokupheka ezilula nezisheshayo zezitsha ze-rye noma ze-buckwheat.
Ukupheka okuwusizo kwabanesifo sikashukela kunikezwe kuvidiyo ekulesi sihloko.
Izimiso Zokupheka Zesifo Sikashukela
Ukubhaka kwabanesifo sikashukela kufanele kuhambisane namazinga ayisisekelo wokudla lesi sifo. Kulokhu, ochwepheshe banaka imithetho efana nale:
ukufakwa esikhundleni sokuphoqelelwa kwefulawa kakolweni nge-rye - ukusetshenziswa kukafulawa webanga eliphansi nokugaya okuhlanganisiwe kuzoba okulungile
ukubekwa eceleni kokusetshenziswa kwamaqanda enkukhu yokuxova inhlama noma ukwehla kwenani labo (ukusetshenziswa kuphela njengokugcwalisa ifomu elibilikile kuvunyelwe),
ungene esikhundleni sebhotela ngemifino noma imajarini ngenqwaba yamafutha,
ukukhetha ngokucophelela kwezithako zokugcwaliswa.
Ngaphezu kwalokho, ukubhaka ngaphandle kofulawa noshukela kufanele kusho ukulawulwa okuphoqelekile kokuqukethwe kwekhalori kanye nenkomba ye-glycemic inqubo yokupheka, hhayi ngemuva. Ngaphezu kwalokho, izingxenye ezinkulu azinconywa sikashukela sohlobo II. Ngaphandle kwalokho, kunobungozi obukhulu bokudla ngokweqile, kanye neqiniso lokuthi ukudla kungahamba kubi.
Ushukela ungafakwa kanjani esikhundleni?
Abaningi besifo sikashukela abazi ukuthi iziphi izithako ezingasetshenziswa esikhundleni sikashukela. Kulokhu, kungcono ukusebenzisa izikhala ezihlukile, isibonelo, i-stevia noma i-fructose. Kunconywa ukuthi uxoxe ngale nketho nochwepheshe. Ngaphezu kwalokho, isiraphu ye-maple noju kuyindlela eyamukelekayo esetshenziswayo. Ukunakwa okukhethekile kufanele kulungiselelwe ufulawa oyosiwe we-bakwheat.
Ishukela kanye nama-pancake angaba imiqondo ehambisanayo ngokuphelele, uma izinto ezinjengobisi lonke, ushukela noma, ngokwesibonelo, ufulawa kakolweni ungafakwa ohlwini lwezakhi zawo. Indlela yokubhaka yabashukela kuleli cala ibukeka kanjena:
gaya ingilazi ye-buckwheat ku-grinder yekhofi noma kusihlanganisi, bese uhlwanyela,
hlanganisa ufulawa obangelwa nengxenye yengilazi yamanzi, ikota tsp. isaladi esitshekile kanye no-30 gr. uwoyela wemifino. Kuhle ukusebenzisa igama elingachazwanga,
ingxube kufanele ifakwe imizuzu engama-20 endaweni efudumele.
Manje lawa pancake e-buckwheat angabhakwa. Ukuze wenze lokhu, udinga ukufudumeza i-pan, kodwa ngaphandle kokuthi ungayigcobeli ngamafutha, ngoba isivele ikhona esivivinyweni. Ama-pancake awusizo we-buckwheat azoba muhle kakhulu ngoju (i-buckwheat, imbali) namajikijolo angafakiwe.
Ngenqubo yokubhaka, ungalungiselela namakhukhi we-oatmeal wesifo sikashukela. Ukulungiselela amakhukhi we-oatmeal, uzodinga ukusebenzisa izibuko ezimbili ze-oatmeal, isipuni esisodwa. ufulawa we-buckwheat, ama-tsp amabili. i-baking powder, i-100 gr. imajarini. Ngaphezu kwalokho, kusetshenziswa esikhundleni sikashukela, amantongomane, omisiwe, ubisi noma amanzi (wezipuni ezimbili). Zonke lezi zingxenye zixubene, nenhlama eqediwe ihlukaniswe izingcezu, ibanikeze ukwakheka kwekhukhi bese isakazwa ephepheni lokubhaka. Ukupheka kufanele kube ekushiseni kwama-degrees angama-180 kuze kube kuphekwe (imvamisa kuthatha imizuzu engekho ngaphezulu kwe-10).
Rye ufulawa wokubhaka iresiphi
Okulandelayo, kuzokwethulwa iresiphi eyisisekelo, ngokusho ukuthi kuzokwazi ukulungiselela ama-cookie omnandi we-diabetes kuphela, kodwa futhi, ngokwesibonelo, ukugoqa ngokugcwaliswa kwezithelo. Ukulungiselela izindlela zokubhaka ezinje zabaneshukela, inhlama iyagoqwa kuzo zonke izithako ezizokwethulwa kamuva, bese ibekwa imizuzu engama-30 endaweni efudumele.
Ngasikhathi sinye, kuzokwazi ukuqala ukulungiselela ukugcwaliswa. Kungahluka kakhulu, kuya ngokuthandwa kwawo wonke amalungu omndeni. Okungcono kakhulu, izithako ezifana nama-apula angenazithelo, izithelo zezithelo zomdiliya, kanye nama-sitrobheli, iplamu nama-blueberries akhona etafuleni likashukela.
Ukuze ukubhaka kusuka kufulawa we-rye uphumelele, kufanele usebenzise ukugcwala okukhulu kakhulu kwezithelo. Ngaphandle kwalokho, kuzophuma inhlama ngesikhathi sokupheka. Ngaphezu kwalokho, kunconywa ukumboza ishidi lokubhaka ngephepha lesikhumba. Izithako ezilandelayo zizodinga ukusetshenziswa:
500 gr. i-rye kafulawa
15 gr imvubelo
200 ml wamanzi afudumele ahlanzekile
usawoti (esicongweni sommese),
tbsp ezimbili. l uwoyela wemifino.
Ungakhohlwa ukusetshenziswa kwama-sweeteners (ukunambitha), kanye nenani elincane lesinamoni. Kuyadingeka ukubhaka kuhhavini osuke usushisa kakade ekushiseni kwama-degrees angama-180 imizuzu engama-35.
Ezinye izindlela zokupheka ushukela
Ukupheka kokubhaka kohlobo lwesifo sikashukela sohlobo 2 kungahluka, njengamakhekhe noma ophaya. Ukuze ulungiselele ikhekhe le-almond-orange, thatha i-orange eyodwa, ebiliswe epanini imizuzu engama-60 bese ichotshozwa nge-blender noma iprosesa yokudla. Kuyelulekwa ukususa imbewu ezithelweni zamawolintshi kusengaphambili.
Okulandelayo, hlanganisa amaqanda amathathu, uhhafu wengilazi yeshukela osele esikhundleni, engeza ama-alimondi aqoshiwe, i-orange puree nengxenye ye-tsp. i-baking powder. Sakaza ingxube efomini bese ubhaka imizuzu engama-40-50 ekushiseni okungama-degrees ayi-180. Kuyinto engathandeki ukukhipha ikhekhe kubumba kuze kube yilapho iphola ngokuphelele. Emva kwalokho, kuvunyelwe ukuthoba nge yoghurti yemvelo (uhlobo olungenawo amafutha) noma ukuyiluma kancane ngayo.
Ngaphandle koshukela, iphayi elinempilo futhi lingalungiswa kwabanesifo sikashukela. Ukulungiselela isobho elimnandi labashukela, kunconywa ukusebenzisa i-90 gr. i-rye ufulawa, amaqanda amabili. Ngaphezu kwalokho, esikhundleni sikashukela (90 gr.), 400 gr. ushizi we-cottage kanye nenani elincane lamantongomane achotshoziwe. Zonke izithako zekhekhe zixubene kahle. Ngemuva kwalokho inhlama ibekwa ephepheni lokubhaka, elihlotshiswe ngezithelo ngaphezulu. Kungcono ukusebenzisa ama-apula noma amajikijolo angafakiwe. Bhaka i-dessert kuhhavini ekushiseni okungama-degrees angama-180-200.
Enye iresiphi ngama-buns amnandi angaphekwa ngemizuzu engama-20-30. Ukuze wenze lokhu, uzodinga ukulandela lezi zinyathelo:
ngenani lama-200 gr. Sebenzisa ushizi we-cottage shizi, kanye neqanda elilodwa ne-tbsp eyodwa. l esikhundleni sikashukela
izengezo ezingeziwe futhi ezingabalulekile kangako kuzoba usawoti esicelweni sommese, uhhafu we-tsp. usawoti no-250 gr. ufulawa
ushizi wasekhishini, iqanda, isiraphu nosawoti kuxutshaniswe kahle,
khona-ke i-soda inqanyulwa uviniga, engezwe enhlama bese ihlanganiswa.
UFour uthelwa ngenani elincane, bese isisindo sihlanganiswa, ufulawa uphinde uphinde ungezwe kuze kube yilapho isisindo sesisesimweni esifanele. Ukwenza ama-buns kunconyelwa ukuba kubhalwe ngokucophelela futhi kubhalwe ngosayizi onjalo okuzoba lula kakhulu.Kunconywa ukubhaka ama-rolls kungadluli imizuzu eyi-10, emva kwalokho bapholile. Kungemva kwalokhu lapho sebekulungele ukusetshenziswa.
Uhlobo luni lwamakhukhi olunokwenzeka ngesifo sikashukela?
Isifo sikashukela yisifo esinamandla esidinga imenyu yokudla eqinile. Kuzodingeka wenqabe izitsha eziningi eziswidi namakhekhe, kepha ungakupheka ngokuya ngokupheka okukhethekile, khona-ke ukudla ngeke kukulimaze.
Okufanele ukwenze lapho ukhetha amakhukhi
Imaphi amakhukhi angenangozi kashukela
Amakhukhi wamahhala we-Homemade Sugar
Amakhukhi anesifo sikashukela - iresiphi yasekhaya (ividiyo)
Imikhiqizo yebhotela, kanye namakhekhe kashukela kanye namakhekhe, ayenqatshelwe kwabanesifo sikashukela. Ungaziphatha kuma-dessert ngama-biscuits wokudla. Izindlela zokupheka zezitsha ezinjalo kufanele zihambisane nezimpawu zesifo kanye nezidingo zesiguli.
Izitolo ezinkulu zinemibukiso ehlukile yeziguli ezinesifo sikashukela lapho kuthengiswa khona imikhiqizo eminingi engenalo ushukela. Ngisho nakwi-Intanethi kunamakhukhi aneshukela kanye namakhekhe, yize kunenzuzo futhi kuwusizo kakhulu ukupheka izinto ezinjalo.
Into esemqoka kumakhukhi anesifo sikashukela ukusetshenziswa kwe-fructose, i-stevia noma noma iyiphi i-sweetener ekulungiseleleni kwayo. Ezinsukwini zokuqala kuzofanela ukuthi ujwayele ukunambitheka kwe-confectionery enjalo. Amakhukhi ane-sweeteners aphansi ngokunambitheka kubalingani bawo bakudala.
Ngaphambi kokuthenga imikhiqizo enjalo, kufanele ubonane nodokotela oyi-endocrinologist, ngoba isifo sikashukela sinezinhlobo eziningana, ngasinye sinezimpawu zaso zokwelashwa. Izifo ezihlangana nazo zivame ukuboniswa, inkambo yazo ingabangelwa ukudla okungafanele.
Abaphephe kakhulu kwabanesifo sikashukela ama-oat nama-biscuit cookies, kanye nama-crackers angenazimpawu ngaphandle kwezengezo. Into esemqoka ukuthi imikhiqizo enjalo akufanele ibe yile:
Inkomba ye-glycemic ye-Homemade noma amakhukhi athengiwe esifo sikashukela kufanele abe aphansi ngangokunokwenzeka. Lapho uyipheka ekhaya, into esemqoka ukugcina imithetho ethile:
lapho ubhaka amakhukhi aneswekile, kungcono ukhethe i-oat, rye, ufulawa webhali,
ungasebenzisi amaqanda enkukhu eluhlaza,
kuphephile ukumiselela ibhotela nge imajarini esele noma enamafutha amancane,
esikhundleni sikashukela, sebenzisa i-fructose noma isiraphu.
Ushukela Kumakhukhi anesifo sikashukela, kungcono ukwengeza ama-sweeteners angakhuphi ushukela. Isibonelo, i-stevia iyingxenye yemvelo. I-ithisipuni yento emnandi enjalo yanele ukusebenzela amakhukhi.
Flour Kungcono ukungasebenzisi izinhlobonhlobo zikakolweni, kepha sebenzisa amamaki aqhelelene anenkomba ye-glycemic ephansi. Amakhukhi amahle kakhulu wesifo sikashukela atholakala ku-buckwheat, ibhali noma ufulawa we-rye. Ukuxuba izinhlobo ezimbalwa nakho kuyazuzisa futhi akunangozi. Ufulawa weLentil uvame ukuthengwa amakhukhi okubhaka. Awukwazi ukusebenzisa amazambane noma isitashi sommbila, okuholela ekuqhakazeni okubukhali kwalesi sifo.
UMargarine Kuyasiza ukukhetha izindlela zokupheka lapho amafutha anjalo alimazayo khona umthamo omncane. Izipuni ezimbalwa zanele ukubhaka amakhukhi angenamnandi futhi angenazifo. Ungabeka u-margarine noma ibhotela nge kakhukhunathi noma i-apula puree elivela ezinhlotsheni eziluhlaza zalesi sithelo.
I-Fructose isetshenziswa njengama-sweeteners, kanti i-vanillin inikeza ukunambitheka esibindini sokudla. Noma yikuphi ufulawa kufanelekile - i-oat noma i-rye. Kwesinye isikhathi kuyehla ithonsi lamantongomane, ushokoledi, ukhukhunathi, noma iyiphi i-zest yamazithelo. Lezi zithako zinikeza ukunambitheka okuveziwe kuma-pastry wesifo sikashukela.
1/3 ipakethe lika imajarini,
1.5 tbsp. ufulawa
Ubuciko be-1/3. i-fructose noma enye i-sweetener,
chips amnyama chocolate umhlobiso.
Epanini elikhulu, hlanganisa zonke izithako, uxove inhlama ebanzi, ethelwa emcwini wokubhaka ngendlela yemibuthano usebenzisa isirinji kakhokho. Bhaka kuma-degrees angama-200 imizuzu eyi-15-20.
Ama-Cookies e-Diabetes e-Diondond
Amaqanda ama-2 izigwaca
Ubuciko be-1/3. i-sweetener,
2 tbsp. ufulawa wokusanhlamvu okuphelele
½ ipakethe le-imajarini enamafutha amancane noma ibhotela,
½ tbsp. uwoyela wemifino
Ibhotela elinemifino nethambile lihlanganisiwe, engeza i-sweetener bese lishaya nge-whisk. Faka iqanda bese ushaya kahle. Faka ufulawa oxutshwe ne-baking powder ne-zest orange. Ngemuva kwalokho engeza ama-alimondi aqoshiwe. Inhlama ixoxwe kahle, ihlukaniswe ukuhanjiswa okuyi-5-6. Ngayinye yakhiwa ngesilinganiso esingu-3 cm, isongwe ngo-foil futhi ifihlwe esiqandisini. Bese-ke zisikwa zibe yimibuthano bese zisakazwa kwesikhumba. Ikhukhi le-almond libhakwe imizuzu engu-15 kuma-degree angama-170-180.
Amakhukhi e-Oatmeal weSifo Sikashukela
100 ml amanzi angenalutho
½ inkomishi yesihlebe, ibhali noma ufulawa we-oat,
Ubuciko. isipuni sebhotela noma i-imajarini engenawo amafutha,
½ isipuni fructose.
I-Oatmeal ihlanganiswa nefulawa. Amanzi athelwa kancane kancane. Thela yonke i-fructose ne-vanillin engxenyeni kafulawa engasasebenzi. Amakhekhe amancane enhlama asatshalaliswa ngesipuni ekhasini lokubhaka elimbozwe ngephepha lokubhaka noma le-foil.
Ungahlobisa amakhukhi we-oatmeal aqediwe ngezithelo ezomisiwe, amajikijolo amasha noma amantongomane amasha. Ngaphambi kokubhaka, amagilebhisi omisiwe, amantongomane aqhekekile, i-zest zest nama-cherries omisiwe kwesinye isikhathi kufakwa enhlama.
Amakhukhi anesifo sikashukela nge-oatmeal
I-1/3 ipakethe lamafutha amancane-noma i-margarine yokudla,
amaqanda amaqanda aphakathi nendawo
1.5 tbsp. i-rye kafulawa
chip ushokoledi nge fructose.
I-margarine ethambile ixubene ne-sweetener ne-vanilla usebenzisa i-mixer noma i-whisk elula. Phula amaqanda ambalwa bese ufaka ufulawa. Thela ushokoledi ophethekile kwinhlama eqoqiwe. Ukubhaka kuphuma kalula futhi kunamakha. I-Margarine noma ibhotela kungenziwa kuthathelwe indawo nge-yogurt, bese wengeza kule iresiphi idlanzana lamaflothi athengwe i-oatmeal anjenge "Hercules".
Imaphi amakhukhi anempilo kakhulu futhi angabi yingozi uma umuntu enesifo sikashukela? Vele, okuphekwe ngezandla zakho. Funda ukuthi ungawenza kanjani amakhukhi ngokwakho ekhaya.
Ngisho nepheki le-khekhe le-inept lingabhekana kalula nalezi zokupheka ezingenhla futhi lithole amakhukhi asekhaya ashibhile ngokunambitheka okungcono, okuphephe kakhulu ekwakhiweni kunamaswidi athengwe namakhekhe, noma ngabe athathwe emnyangweni okhethekile kwabanesifo sikashukela.
Amaqebelengwane amnandi futhi anempilo ezigulini ezinesifo sikashukela
Akuyona imfihlo ukuthi isifo esibi kangako njengesifo sikashukela sidinga ukudla okuqinile. Kukhona uhla lokudla olunqatshelwe ngokuphelele kwabanesifo sikashukela. Akuyona indawo yokugcina kulolu hlu ehlalwa yimikhiqizo kafulawa, ikakhulukazi leyo eyenziwe ngofulawa weprimiyamu futhi enenkomba ephezulu ye-glycemic. Kodwa-ke, usengaphuma kulesi simo; ukuphekela abantu abanesifo sikashukela akuyona inganekwane! Kunezindlela zokupheka ezikhethekile ongapheka ngazo ukudla okubhakiwe okumnandi ezingakwazi ukulimaza impilo yesiguli.
Imithetho yokwenza ufulawa kwabanesifo sikashukela
Ngaphambi kokuqhubeka nokulungiswa kokubhaka kweziguli ezinesifo sikashukela, kuyadingeka ukuthi unake eminye imithetho:
Sebenzisa ufulawa we-rye kuphela. Futhi kungcono uma kungokwamabanga aphansi kakhulu nama-coarse.
Zama ukungafaki inhlama ngamaqanda, kepha ungasebenzisa amaqanda abilisiwe njengendawo yokugcwalisa.
Esikhundleni sebhotela, sebenzisa imargarine enokuqukethwe okunamafutha amancane.
Faka esikhundleni ushukela nge-sweetener. Ngokuqondene ne-sweetener, kungcono uma kungokwemvelo, hhayi okwenziwe. Umkhiqizo wemvelo kuphela okwazi ukugcina ukwakheka kwawo kungashintshiwe ngesikhathi sokwelashwa okushisa.
Njengokugcwaliswa, khetha leyo kuphela imifino nezithelo ezivunyelwe ukudliwa yisifo sikashukela.
Usebenzisa noma yikuphi ukupheka okungezansi, udinga ukubheka okuqukethwe kwekhalori kwemikhiqizo.
Ungabhaki ikhekhe noma uphaya wamasayizi amakhulu. Kungcono uma kungumkhiqizo omncane ohambelana neyunithi engu-1 yesinkwa.
Ukubona le mithetho elula, ungakwazi kalula futhi umane ulungiselele ukwelashwa okumnandi futhi okunemibandela, okuzobongwa ngumuntu onesifo sikashukela. Inketho enhle kakhulu ukubhaka amaqebelengwane e-rye kafulawa agxishwe amaqanda no-anyanisi oluhlaza, amakhowe othosiwe, ushizi we-tofu, njll.
Ungadliwa ngokwenza inhlama, ikhekhe nepayi
Le iresiphi eyisisekelo, ngesisekelo lapho ungapheka khona ama -ozizi ahlukahlukene, ama-roll, rolls nanoma yikuphi ukugcwaliselwa kwabanesifo sikashukela, njll. Ukulungiselela inhlama, udinga ufulawa we-rye we-0.5 kg, imvubelo engama-30 g, amanzi ayi-400 ml, ingcosana kasawoti nezipuni ezimbili kawoyela sunflower. Hlanganisa konke, engeza enye i-0.5 kg kafulawa bese uxova inhlama ebanzi. Beka izitsha ngenhlama kuhhavini ofudumele bese uqala ukupheka ukugcwaliswa. Bhaka ama-khekhe kuhhavini.
Ngaphezu kwamathayi abasebenza ngesifo sikashukela, ungapheka ikhekhe elimnandi nelinephunga elimnandi. Ukuze wenze lokhu, udinga iqanda eli-1, imajarini enamafutha amancane ngesamba esingu-55 g, ufulawa we-rye osenanini wezipuni ezi-4, i-peel kalamula, omisiwe nosawoti obambele yena. Usebenzisa i-mixer, hlanganisa iqanda ne imajarini, engeza i-sweetener bese ufaka i-zest zest. Ngemuva kwalokho, kufakwa ufulawa nezomisiwe kumxube. Faka inhlama kwifomu elilungiselelwe kwangaphambili bese ubhaka kuhhavini ekushiseni okungama-200 ° C cishe imizuzu engama-30.
Ukulungiselela iphayi elimnandi nelikhangayo labanesifo sikashukela, uzodinga ufulawa we-90 g, amaqanda ama-2, ama-90 g amnandi, u-400 g we-cottage shizi kanye namantongomane ambalwa achotshoziwe. Hlanganisa konke, faka inhlama ekhasini lokubhaka, bese uhlobisa ngezithelo ngaphezulu - ama-apula nama-amajikijolo angenasithelo. Bhaka kuhhavini ekushiseni okungu-180-200 ° C.
Izinketho zenhlama zingahluka kakhulu, ungafumba inhlama kubhiya, ushizi we-cottage shizi, ukhilimu omuncu noma yoghurt, bese usebenzisa izithelo ezintsha nezilukiwe njengamafrimu noma ikhekhe. Phezulu ngenani elincane lejeli, elilungiselelwe ngesisekelo se-pectin namajusi wezithelo zemvelo.
Ungadliwa ngokwenza ama-roll namaqebelengwane
Ukuze ulungiselele umqulu wezithelo, uzodinga ufulawa we-rye ngesilinganiso esingu-3 tbsp., UKefir ngenani lama-200 ml, imajarini - i-200 g, usawoti esicubu sommese no-0.5 tsp. i-soda ehlengiwe 1 tbsp. l uviniga. Bopha inhlama, bopha ifilimu lokunamathisela bese ufaka esiqandisini ihora eli-1. Lapho inhlama isesiqandisini, lungisa ukugcwaliswa: usebenzisa iprosesa yokudla, gaya ama-apula omuncu ama-5-6, inani elilinganayo lamaplamu, engeza ujusi kalamula nesinamoni, kanye ne-sweetener, uma ufisa. sukarazit. Roll inhlama ibe ungqimba elincanyana, beka ukugcwaliswa kwezithelo bese ukugoqa ube umqulu. Bhaka imizuzu engaba ngu-50 ekushiseni okungu-170-180 ° C.
Ikhekhe le-almond-orange. Ngaphambi kokupheka leli khekhe elimnandi, udinga ukuthatha i-orange eyodwa, ubilise epanini ihora bese uligaya nge-blender noma iprosesa yokudla ngemuva kokususa imbewu kuyo. Hlanganisa amaqanda amathathu, ½ tbsp. i-sweetener, engeza ama-alimondi aqoshiwe, i-orange ecubuziwe ne-0.5 tsp. i-baking powder. Faka le ngxube kubumba bese ubhaka imizuzu engaba ngu-40-50 emazingeni okushisa ayi-180 ° C. Ikhekhe ayinconywa ukuba iphume ekubumbeni ize ifudumele phansi. Ngemuva kokuwuthambisa ngeyoghurti yemvelo enganoni noma uyidle ngokuluma.
Amakhukhi awathandwa kangako phakathi kwabanesifo sikashukela. Nazi ezinye izindlela zokupheka:
Ukwenza amakhukhi we-oatmeal, udinga u-2 tbsp. i-oatmeal, 1 tbsp. u-rye ufulawa, i-baking powder enesilinganiso esingu-2 tsp, iqanda eli-1, imajarini ngesilinganiso esingu-100 g, ushukela obambele, amantongomane, omisiwe nobisi noma amanzi ngesilinganiso se-2 tbsp. l Hlanganisa zonke izithako, hlukanisa inhlama eqediwe ibe yizicucu, ubanikeze ukwakheka kwekhukhi bese ubeka eshishini lokubhaka. Kufakwe endaweni yokushisa engu-180 ° C kuze kube ilungele.
Ukulungiselela amakhukhi e-herculean, uzodinga i-fructose, amaqanda ama-2, i-vanillin, i-herculean flakes - u-0.5 tbsp. no-0.5 tbsp. i-buckwheat, ibhali, amabele noma ufulawa we-oat. Ama-squirrels ahlukaniswa ne-yolks futhi ashayiwe. Ama-yolks angumhlabathi nge-fructose ngokufakwa kwe-vanillin. Faka ama-flakes, 2/3 kafulawa wonke uhlanganise. Hlanganisa abelungu abashayiwe, ufulawa osele bese uxuba ngobumnene kakhulu. Gcoba ishidi lokubhaka ngamafutha, futhi kungcono ukulimboza ngeshidi elingasinamatheki bese ubeka ikhukhi phezu kwalo ngesipuni. Bhaka ngo-200 ° C kuze kube nsundu wegolide. Amajikijolo asetshenziswa kwasekuqaleni kuresiphi, kepha kwabanesifo sikashukela kungcono ukukufaka esikhundleni samajikijolo omisiwe noma ushokoleti omuncu osikiwe ku-fructose.
Ukwenza amakhukhi ngama-apula esifo sikashukela, udinga u-0.5 tbsp. ufulawa we-rye ne-oatmeal engaka, amaqanda ama-4, ¾ tbsp. xylitol, 200 g imajarini, 0.5 tsp. usawoti, 1 tbsp. l uviniga ne-vanillin. Hlukanisa ama-yolks kumaprotheni bese uxova inhlama, unezela kuzo zonke izithako ngaphandle kwe-xylitol, bese ucisha usawoti noviniga. Khipha inhlama ngephini yokugoqa bese usika izigcawu ezilinganayo. Thatha ama-aphula omuncu ayi-1 kg, ugeze, uwasebenzise njengokugcwaliswa kwesibindi ngasinye. Gcwalisa isikwele ngasinye ngokugcwaliswa kwama-apula ngamaprotheni ashaywe nge-xylitol. Bhaka kuhhavini ngo-180 ° C.
Ungapheka ukudla okumnandi kwabanesifo sikashukela esibizwa ngeTiramisu ekhaya. Njengamaqebelengwane, ungasebenzisa noma yimaphi amakhukhi owomile ongafakiwe bese uwathambisa ngesithako esenziwe ngengxube yoshizi weMascarpone (ungasebenzisa iFiladelphia), ukhilimu, ushizi wefolishi ongenawo mafutha othambile kanye nefrijini. I-Amaretto ne-vanillin zingangezwa ukunambitha. Amakhukhi abekwe esiqandisini ubusuku bonke.
Yini i-sweetener efanelekile kwabanesifo sikashukela
I-sweeteners yesifo sikashukela yizinto ezivela eqenjini lama-carbohydrate angaguquki abe ushukela emzimbeni, ngaleyo ndlela ukugcina lesi sifo silawulwa. Emakethe yemikhiqizo yabashukela, kunikezwe i-assortment enkulu yabakhiqizi bakwamanye amazwe nabasekhaya, etholakala ngendlela yamaphilisi we-powder noma ancibilikayo. Ama-sweeteners kanye nesifo sikashukela ahlukaniseki, kepha yikuphi okungcono? Yini inzuzo yabo kanye nokulimala kwabo?
Kungani ushintshe ushukela?
I-Syndrome ye-hyperglycemia engapheli noma, ngamagama alula, isifo sikashukela yisifo esibuhlungu sesikhathi sethu. Ngokusho kwezifundo ze-WHO zezibalo, cishe abantu abangamaphesenti angama-30 abantu beminyaka ehlukene banesifo sohlobo 1 nohlobo 2. I-epidemiology yalesi sifo isuselwe kuzimbangela eziningi nasezintweni ezisongela phambili zokuthuthukisa isifo sikashukela, kepha noma kunjalo, lesi sifo sidinga indlela ehlanganisiwe yokwelashwa.
Ku-mellitus yesifo sikashukela, ukuphazamiseka okungama-metabolic okungapheli kwenzeka, okubangela ukwanda kweshukela egazini. Ingozi yohlobo lwesifo sikashukela sohlobo 1 noma uhlobo 2 ukuthi lesi sifo sithinta cishe zonke izitho zangaphakathi nezinhlelo, kanti ukwelashwa okungazelelwe kungaholela emiphumeleni emibi futhi engenakulungiswa.
Indawo ekhethekile ekwelashweni kwesifo sikashukela ihlala ekudleni okuyisipesheli, okubandakanya inani elilinganiselwe lamaswidi: ushukela, i-confectionery, izithelo ezomisiwe, amajusi wezithelo. Kunzima kakhulu noma cishe akunakwenzeka ukukhipha ngokuphelele amaswidi ekudleni, ngakho-ke, iziguli ezinesifo sikashukela ziyanconywa ukusebenzisa izithambisi.
Kuyaziwa ukuthi ezinye izikhala zikashukela azilimazi ngokuphelele, kepha kukhona lezo ezingadala ukulimala okukhulu empilweni. Ngokuyisisekelo, ama-sweeteners wemvelo nawokufakelwa ahlukaniswa, ngalinye lawo liqukethe izakhi ekubunjweni kwalo, isenzo sazo kuhloswe ukwehlisa ushukela wegazi.Ama-sweeteners asetshenziselwa uhlobo lwe-1 nohlobo 2 sikashukela mellitus.
Ama-sweeteners wemvelo enziwa ngezinto zokusetshenziswa zemvelo, anambitheka omnandi kakhulu nokuqukethwe kwekhalori ephezulu. Izikhala ezinoshukela ezinjalo zidonswa kalula yipheshana lesisu, azibangeli ukukhiqizwa kwe-insulin ngokweqile. Inani lama-sweeteners wemvelo akufanele lidlule amagremu angama-50 ngosuku. Odokotela bavame ukuncoma ukuthi iziguli zabo zisebenzise izikhala zikashukela zemvelo, ngoba azibangeli ukulimaza impilo yabantu, zibekezelelwa kahle ngumzimba weziguli ezinesifo sikashukela.
Esikhundleni esinoshukela esingenangozi sivela kumajikijolo nezithelo. Ngokuqukethwe kwayo kwekhalori kufana noshukela. I-Fructose imunca kahle isibindi, kepha uma isetshenziswa ngokweqile isengakhuphula ushukela wegazi (ngokungangabazeki onobungozi kwisifo sikashukela). Umthamo wansuku zonke akufanele udlule i-50 mg. Kusetshenziselwa uhlobo 1 lwesifo sikashukela.
I-Xylitol yaziwa ngokuthi isengezo sokudla se-E967. Yenziwe ngomlotha wasentabeni, ezinye izithelo, amajikijolo. Ukusetshenziswa ngokweqile kwalo mkhiqizo kungadala ukuphazamiseka emgudwini wesisu, futhi uma kwenzeka kuba ne-overdose - ukuhlaselwa okubi kakhulu kwe-cholecystitis.
ISorbitol - isengezo sokudla i-E420. Ukusetshenziswa njalo kwalokhu okubambele ushukela kukuvumela ukuthi uhlanze isibindi sakho sezinto ezinobuthi kanye noketshezi oluningi. Ukusetshenziswa kwaso kwisifo sikashukela akubangeli ukukhuphuka kwe-glucose egazini, kepha lo mkhiqizo unamakhalori amaningi, futhi kuvame ukuba nomthelela ekwandeni kwesisindo somzimba kwabashukela.
IStevioside iyi-sweetener eyenziwe ngesitshalo esinjenge-stevia. Lokhu kufaka ushukela yikhona okuvame kakhulu phakathi kwabanesifo sikashukela. Ukusetshenziswa kwayo kunganciphisa ushukela wegazi. Ngokunambitheka kwayo, i-stevioside imnandi kakhulu kunoshukela, empeleni ayinayo amakhalori (lokhu kuyinzuzo engenakuphikwa!). Ikhiqizwa ngesimo se-powder noma amaphilisi amancane. Izinzuzo ze-stevia kushukela zifakazelwe ngocwaningo lwesayensi, ngakho-ke imboni yezemithi ikhiqiza lo mkhiqizo ngezindlela eziningi.
Ama-sweeteners wesifo sikashukela sendalo yemvelo awunazo izinhlanganisela zamakhemikhali ezithinta inani le-glucose, zingasetshenziselwa uhlobo lwe-1 noma uhlobo lwe-2 mellitus, engezwe kwimikhiqizo ehlukahlukene ye-confectionery, itiye, okusanhlamvu neminye imikhiqizo yokudla. Ukufakwa esikhundleni okunoshukela okunjalo akuphileli nje kuphela, kepha futhi kumnandi. Ngaphandle kokuphepha kwabo, kufanele zisetshenziswe ngemuva kokubonisana nodokotela. Ama-sweeteners wemvelo aphezulu kakhulu kilojoule, ngakho-ke abantu abakhuluphe ngokweqile kudingeka banqabe ukusetshenziswa ngokweqile.
Ama-sweeteners synthetic anokuqukethwe kwekhalori okuphansi, awenyusi ushukela wegazi futhi akhululwa ngokuphelele ngokwemvelo emzimbeni. Kepha ekwenziweni kwemikhiqizo enjalo, izinto zokwenziwa nezinobuthi zivame ukusetshenziswa, izinzuzo zazo zingaba ngamanani amancane, kepha umzimba wonke ungalimaza. Amanye amazwe ase-Europe ukuvimbele ukukhiqizwa kwama-sweeteners okwenziwa, kepha asathandwa kakhulu phakathi kwabanesifo sikashukela ezweni lethu.
ISaccharin ingumnandi wokuqala emakethe yesifo sikashukela. Njengamanje kuvinjelwe emazweni amaningi omhlaba, njengoba izifundo zomtholampilo zikhombisile ukuthi ukusetshenziswa kwayo njalo kuholela ekuthuthukisweni komdlavuza.
Indawo engaphansi kwamakhemikhali amathathu: i-aspartic acid, i-phenylalanine ne-methanol. Kepha ucwaningo selukhombisile ukuthi ukusetshenziswa kwalo kungadala ingozi enkulu empilweni, okuyilezi:
izifo ezinzima zobuchopho
I-cyclamate - ipheshana esiswini limunwa ngokushesha, kepha likhishwa kancane emzimbeni. Ngokungafani namanye ama-sweeteners, awubuthi obuningi, kepha ukusetshenziswa kwawo kusandisa ingozi yokuhluleka kwezinso.
Izikhathi ezingama-200 zimnandi kunoshukela ojwayelekile. Kuvame ukungezelelwa ku-ayisikhilimu, kushukela nakumaswidi. Le nto iyingozi emzimbeni, njengoba iqukethe i-methyl alcohol. Kwamanye amazwe aseYurophu kuyenqatshelwa ekukhiqizeni.
Ngokusekelwe kokushiwo ngenhla, singaphetha ngokuthi ukusetshenziswa kwama-synthetic ushukela kuyingozi kakhulu kunokuhle emzimbeni. Kungakho kungcono ukunaka imikhiqizo yemvelo, futhi uqiniseke ukuthi uthintana nodokotela ngaphambi kokusebenzisa noma yimuphi umkhiqizo ukuthi ngandlela thile ungathinta impilo.
Kuyenqatshelwe ngokuphelele ukusebenzisa ama-sweeteners okwenziwa ngesikhathi sokukhulelwa nokuqunjelwa. Ukusetshenziswa kwazo kungazilimaza ingane noma ngowesifazane uqobo.
Ku-mellitus yesifo sikashukela, zombili izinhlobo zokuqala nezesibili, izithako zoshukela zokwenziwa kufanele zisetshenziswe ngokulinganisela futhi kuphela emva kokubonana nodokotela. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi ama-sweeteners awayona yezidakamizwa ekwelapheni i-mellitus yesifo sikashukela, awanciphisi inani likashukela egazini, kepha vumela kuphela abaneshukela abanqatshelwe ukudla ushukela noma amanye amaswidi "ukwenza impilo yabo ibe mnandi".
Njengamanje, phakathi kwabanesifo sikashukela, i-swevia sweetener, enamandla okulawula amazinga kashukela, isetshenziswa njenge-prophylactic yohlobo 1 no-2 sikashukela. Emakethe yemikhiqizo yesifo sikashukela, uStevia wethulwa hhayi kuphela ngesimo se-sweetener, kodwa futhi ngesimo setiya se-herbal, amaphilisi, amaphilisi. I-Stevia esetshenziswa njalo ikuvumela ukuthi:
yenza ushukela wegazi abe ngokwejwayelekile
shisa amanoni omzimba
thuthukisa ukugcwala kwegazi,
sindisa umfutho wegazi,
cholesterol yegazi ephansi.
Ekuqhubekeni kwezifundo, kwatholakala ukuthi uma uStevia ekhona ekudleni kweziguli ezinesifo sikashukela, khona-ke lokhu kukuvumela ukuthi ubuyisele umsebenzi wesibindi namanyikwe, ukukhiqiza i-insulin yakho uqobo.
I-Stevia ushukela esikhundleni sikashukela ayikwazi ukufaka ushukela kuphela, kepha futhi ingathuthukisa isimo esivamile seswekile. IStevia ingumkhiqizo wamakhambi ayi-100% ongenazo izinto eziphikisayo, ayinawo umthelela onobuthi emzimbeni womuntu futhi iphephe ngokuphelele ukuthi isetshenziswe.
Izinzuzo nokulimazeka kwama-sweeteners ohlobo lwe-1 noma isifo sikashukela se-2 ezehla ekukhetheni ukudla okungokwemvelo okungenamphumela onoshevu emzimbeni futhi kuphephile ngokuphelele ukusebenzisa, njengoStevia. Kunoma ikuphi, isifo sikashukela yisifo esibi esidinga ukubhekwa njalo yisiguli nodokotela.
Ukuzilolonga ngokwakho noma ukungahambisani nokudla kungaholela emiphumeleni emibi futhi engenakulungiswa. Kungakho udinga ukwethemba uchwepheshe ozokutshela ukuthi iziphi izinambuzane ezingcono ongazisebenzisa kuwe, anikeze izincomo ezisebenzayo futhi akunikeze indlela yokwelashwa efanelekile yokugcina lesi sifo silawulwa.
I-Stevia ne-sucralose: kungani odokotela bencoma
Okwamanje, kukhona ama-sweeteners amabili angenawo ama-contraindication nemiphumela emibi:
I-sucralose iyinto ephephe kunazo zonke esizukulwaneni sokugcina kulokhu, eguqulwe kushukela elijwayelekile, eqhutshwa ngobuchwepheshe obukhethekile. Ngenxa yalokho, okuqukethwe kwekhalori komkhiqizo kuyancipha futhi amandla ayo okuthonya ukuqoqwa kwe-glucose emzimbeni ayasuswa. I-Sucralose ayinayo imiphumela ye-carcinogenic, mutagenic nephrotoxic. Ngaphezu kwalokho, lo muthi awunamunca ngokuphelele umzimba futhi awuthinti umzimba we-carbohydrate metabolism, ngakho-ke ungasetshenziswa kubantu abanesifo sikashukela kanye nabantu abakhuluphele,
i-stevia isitholakala emaqabungeni esitshalo segama elifanayo, elibizwa nangokuthi utshani bezinyosi. Iphakeme ngokunambitheka kushukela futhi kungenzeka ukuthi ithathe uju nayo. Umuthi futhi unezakhiwo eziningi zokwelapha: kunciphisa ukugcwala kwe-glucose egazini, kubambezela inqubo yokuguga kwamaseli nezicubu, kwehlise i-cholesterol, futhi kuthuthukise imetabolism ephelele.
Ubuntu baqala ukukhuphula ngokushesha izinga lobuhlakani bakhe ngemuva kokuba umkhiqizo wezimboni ushukela ukhuphuka ngezikhathi ezithile futhi lo mkhiqizo utholakala kuwo wonke umuntu. Ingqondo yomuntu wesimanjemanje, odinga i-glucose emsulwa, ithola ushukela onele futhi isebenza kahle.
Ukudlula kwalo mkhiqizo ohlanzekile kugcinwa emzimbeni, kugcinwe endaweni yokugcina amafutha. Ubusebenzisa ngokuzikhandla ngokomzimba, futhi le mpahla iyamsiza ukuba alondoloze imisebenzi yakhe.
Lesi sici somzimba womuntu, esakhula phakathi namakhulu eminyaka lapho ushukela besinganele, sesibe imbangela yezifo eziningi kumuntu wanamuhla. Imbangela yezifo ezinjenge-candidiasis, ukukhuluphala, isifo sikashukela ukuhlukunyezwa kwamaswidi, amakhekhe, iziphuzo ezimnandi.
Ama-sweeteners enzelwe ukunciphisa ukusetshenziswa kwamaswidi ukuze kuthuthukiswe umzimba.
Ukusebenza ngokomzimba okusebenzayo akuveziwe ezimpilweni zabantu abaningi, namaswidi ekwandisweni kokudla. Ngenxa yalokhu, imetabolism iyaphazamiseka, ukukhuluphala kuyavela. Ngemuva kwalokho ama-pancreas kwabanye abantu ngeke esakwazi ukukhiqiza i-insulin ukucubungula wonke amaswidi adliwayo. Lokhu kusho ukuqala kwesifo sikashukela sohlobo 2.
Ukunciphisa ukusetshenziswa koshukela kwabathandi abathandekayo nokwenza amazinga alo egazi abe ngokwejwayelekile, odokotela bancoma ukudla izithambisi.
Ziyadingeka ngesikhathi sokudla, lapho kudingeka ukuphoqa umzimba ukuqala ukucubungula amasheya atholakalayo.
I-sweeteners yesifo sikashukela 2 inokuqukethwe okuphansi kwekhalori, ukunambitheka okumnandi kakhulu, i-solubility enhle. Zingakhiqizwa ngokusebenza ezindaweni zokuhlinza noma zitholakale ngemuva kokwelashwa ngamakhemikhali kwemikhiqizo yemvelo equkethe.
Njengoba ukukhiqizwa kwabo kusekelwe ezinqubweni zamakhemikhali, bonke banemiphumela emibi. Ukungabekezelelani komuntu ngamunye yikhona okuvame kakhulu kubo.
Ama-amino acid ahlanganisiwe anomunambithi omnandi kakhulu, ongondlekile.
ISachcharin yaba indawo yokuqala kashukela. Lo mkhiqizo wamakhemikhali, owakhiwa ngokuhlanganisa i-sulfamino-benzoic acid, wathandwa engxenyeni yokuqala yekhulu lama-20, lapho kwakukhona ukuntuleka koshukela obukhulu.
Ingathengwa kwifomu lethebhulethi ekhemisi, kepha ukudla okuphephile kwansuku zonke komuntu kuyizingcezu ezi-4 kuphela ngosuku, ngoba kungadala ukwakheka kwezinhlobo ezahlukahlukene zezimila.
I-Suklamat ingathengwa ngohlobo lwesiraphu noma ngamathebulethi. Kungezwa okusanhlamvu namakhekhe, ngoba lapho kufudumele akuniki ukunambitheka. Kungadala ukusabela komzimba.
Izinhlobo zezinto zokwenziwa zifaka okungabizi:
Acesulfame potassium, ekhawulelwe ekuhlulekeni kwenhliziyo.
I-Aspartame, ivinjelwe i-phenylketonuria.
I-Sodium cyclamate, okungafanele isetshenziselwe ukwehluleka kwezinso.
Imvamisa yansuku zonke yama-cyclamates nama-aspartame ayi-11 mg nge-1 kg yesisindo.
ISorbitol, i-xylitol ne-fructose zingama-sweeteners wemvelo ahlobene noshukela oshukela.
ISorbitol itholakala kwifomu le-crystalline. Inombala omhlophe nokunambitheka okumnandi. Ikhiqizwa kusuka amajikijolo. Inomphumela we-choleretic ne-laxative. I-4 kcal nge-g yenza lolu hlobo lwephunga lube yikhambi elihehayo phakathi kwabaswidi bohlobo 2 sikashukela.
I-Xylitol isho futhi i-synthetiki yemvelo yamakhemikhali futhi ikhiqizwa ngesimo se-powder. Lo mkhiqizo wekhalori ophansi. Ku-1 g ye-xylitol, yi-4 kcal kuphela. Ingasetshenziswa esikhundleni sikashukela ekuphekeni.
I-Fructose ikhiqizwa ngezithelo. Kuyi-monosaccharide etholakala kuzo zonke izithelo ezimnandi. Le sweetener idonswa ngokukhethekile yisibindi, futhi ngokweqile, umzimba uyiguqula ibe ngamafutha ngenkuthalo kunezinye izinhlobo zikashukela. Kwakuwushukela wokuqala owatholakala esintwini, futhi umzimba wawusetshenziselwa ukugcinela ikusasa. i-fructose inyusa ushukela wegazi, ngokungafani neglucose.
Ukudla okwenziwa nsuku zonke akuyona ngaphezu kwe-50-70 g ngosuku. Lokhu kuyinto evamile kumdala.
Isifo sikashukela i-mellitus yisifo esingafaki ushukela kumenyu yansuku zonke. Esikhundleni salokho, izithasiselo kufanele zisetshenziswe. Kodwa ingabe zonke azinangozi? Akuwona wonke ama-sweetener anganciphisa ushukela wegazi.
Namuhla, kunezindawo eziningi ezinoshukela. Odokotela bavame ukunquma okungahle kuthathe indawo kashukela kushukela. Abaningi futhi bazisebenzisa njengezengezo zokudla. Kodwa-ke, akubona bonke abasebenza izinhlayiya abanobungozi. Kungcono ukukhetha ama-sweeteners wemvelo kwabanesifo sikashukela, kodwa ukuze uqonde ukuthi ushukela ungashintshwa kanjani, udinga ukwazi izici zomkhiqizo ngamunye.
Izithako zokudla okunempilo zemvelo zingama-khalori aphezulu kakhulu, ngaphezu kwalokho, eziningi zazo zinambitheka kakhulu kunambitheka ushukela wetafula. Ngakho-ke, ukufaka esikhundleni sikashukela ku-Type 2 sikashukela ngama-sweeteners wemvelo akusebenzi, umehluko yi-stevia.
Izikhundla zemvelo ziqukethe ama-carbohydrate amaningi, futhi azilungele bonke abanesifo sikashukela. Ngakho-ke, kungenzeka yini ukufaka ushukela kushukela noshukela wezemvelo futhi yikuphi ukukhetha okumnandi ukukhetha?
Wonke ama-sweeteners ahlukaniswe izinhlobo ezimbili - zemvelo nezokufakelwa. Nazo, zihlukaniswe futhi ziba yilezi zinhlobo ezilandelayo:
iguqulwe glucose, kepha kancane kakhulu, ngenxa yalokho azibangeli i-hyperglycemia - ushukela, i-fructose,
akuguqulwanga ngokuphelele ku-glucose ngemuva kokusetshenziswa futhi ungenyusi izinga layo emzimbeni - ama-sweeteners.
Yikuphi ukungenela esikhundleni sokukhetha okufanele kuxoxwe ngakho ngokuningile nodokotela wakho, khona-ke sizosho ngokuningiliziwe ngakunye kwabo.
Ama-sweeteners amaningi afakwa ku-contraindication kunoma ngubani onesifo sesibindi. Ziphinde zenziwe nge-contraindicated for allergies, izifo zesisu. Amanye ama-sweeteners anezinto ezibuthakathaka ze-carcinogenic futhi aboshwe abantu abamele umdlavuza.
I-Fructose i-contraindicated ngezinga elifanayo noshukela. ngoba iyi-isomer ye-glucose futhi iyingxenye yoshukela. Emzimbeni, i-fructose iguqulwa ibe ushukela. Ngemuva komjovo we-insulin, inani elincane le-fructose lingasetshenziselwa ukubuyisela ukugxila kwe-glucose. Ngokugcwala okukhulu kwama-carbohydrate egazini, ukusetshenziswa kwe-fructose kuphambene ngokuphelele.
Ngakho-ke, ama-sweeteners yi-polyhydric alcohols, ama-glycosides nezinye izinto ezingewona ama-carbohydrate, kepha abe nokunambitheka okumnandi. Lezi zinto zidilizwa emzimbeni ngaphandle kokubamba iqhaza kwe-insulin; ushukela awakheki ngemuva kokuqhekeka kwawo. Ngakho-ke, lezi zinto azithinti inani le-glucose kuma-diabetes.
Kodwa-ke, wonke ama-sweeteners anemiphumela emibi. ezinye zingama-carcinogens, ezinye zidala ukuqunjelwa, kanti ezinye zigcwala isibindi. Ngakho-ke, lapho uzisebenzisa, isiguli sidinga ukuqaphela futhi siqiniseke ukuthi isifiso sokunambitha ukudla okungenampilo kwe-carbohydrate asiholeli ezinkingeni ezinkulu.
Esikhundleni sikashukela sikashukela: izinhlobo, ezingenangozi noma cha
I-sweeteners yesifo sikashukela yizinto ezivela eqenjini lama-carbohydrate angaguquki abe ushukela emzimbeni, ngaleyo ndlela ukugcina lesi sifo silawulwa. Emakethe yemikhiqizo yabashukela, kunikezwe i-assortment enkulu yabakhiqizi bakwamanye amazwe nabasekhaya, etholakala ngendlela yamaphilisi we-powder noma ancibilikayo.
Ama-sweeteners kanye nesifo sikashukela ahlukaniseki, kepha yikuphi okungcono? Yini inzuzo yabo kanye nokulimala kwabo?